मनोज गजुरेललाइ पुर्व पत्नी मिना ढकालको अपृय शब्द प्रहार, आफ्नै जोडि सँग भाइटिका लगायौ के हो?:: Mero Desh
Published on: २४ कार्तिक २०७८, बुधबार ०१:३९
काठमाडौं। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले अर्को बिहे गरिपछि पनि पूर्व पत्नि मिना ढकालले मनोजबारे चासो राख्न छोडेकी छैनन् । उनले फेसबुकमा मनोजको तस्वीर लाई लिएर एक नराम्रो स्टाटस राखेकी छिन्। मनोजको नाम नलिइकनै मनोजको नयाँ जोडिलाई मिनाले अप्रिय लेखेकी हुन् ।
मिनाको स्टाटसमा लेखिएको छ । यस्पालीको भाइ टिका मा सबै मान्छेले दाजु भाइ दिदी बैनी संगको फोटो पोस्ट गरे । एउडो कलाकार नौटंकिले त आफ्नो जोडि संग पो बैनी टीका ला एछ कि केहो?? यस्तो स्टाटस लेखेपछि मिनालाई धेरैले नराम्रो भ नेका छन् । तर उनी कमेन्ट गर्ने हरुसँगै जाई लागेकी छिन्।
यो पनि, ,काठमाडौं । चर्चित टिभी रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनमा उपविजेता बनेका विक्की अग्रवालकी आमा दुर्गा थापामगरको काठमाडौंमा आकस्मिक नि’धन भएको छ ।कोठाभित्रै बे’होश अवस्थामा भेटिएकी उनलाई अस्पताल पुर्याउनासाथ डाक्टरले मृ’त घोषित गरेका थिए ।
उनको मृ’त्यूको कारण खुलेको छैन् ।अन्दाजी ६० वर्ष उमेरकी दुर्गा सु’गर र प्रे’सरकी रो’गी थिइन् । हिजो दिउसो तीन बजे बिक्की आमालाई कोठामा छोडेर बाहिर नि’स्कि एका थिए ।बेलुका सात बजे कोठामा पुग्न आमालाई बे’होश अवस्थामा भेटेका थिए ।त्यसपछि बिक्कीले उनलाई मे’डिकेयर अस्पताल पुर्याए ।
तर, चिकित्सकहरुले मृ’त घो’षित गरे ।कमेडी च्याम्पियन को उपाधि जित्न नसकेपछि विक्की नेपालमा निकै लोक प्रिय बनेका थिए । त्यसैले उनलाई काठमाडौंमै से’टल गर्न दुर्गा सिक्किमदेखि आएकी थिइन् ।कमेडी च्याम्पियनको फाइनलमा पनि दुर्गा र उनका श्रीमान छोराको
हौसला बढाउन काठमाडौं आएका थिए । श्रीमती अ’कस्मात बि’रामी भ एको ख’बरपछि बिक्कीका बुवा पनि आज सिक्कमबाट काठमाडौं आइपुगेका थिए ।तर, उनले श्रीमतीलाई जि’वित भेट्न सकेनन् । अस्पतालबाट दुर्गालाई डि’स्चार्ज गरी एम्बुलेन्समा राखेर सिक्किम लगिए को छ।